काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि प्रदर्शन जारी नै छ । कहिले विद्यार्थीको प्रदर्शन, कहिले शिक्षकको प्रदर्शन, कहिले वकिलको प्रदर्शन त कहिले झगडियाको प्रदर्शन । प्रतिबन्ध लगाएपछि त झन् त्यसको विरुद्धमा पनि प्रदर्शन । ​​​​​​​
३० फाल्गुन २०७५ बिहीबार
काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आइन्दादेखि प्रदर्शन गर्न पाइँदैन भनेर सरकारले प्रतिबन्ध त उहिल्यै लगाइसकेको थियो । तर प्रतिबन्ध लगाए पनि प्रदर्शन जारी नै छ । कहिले विद्यार्थीको प्रदर्शन, कहिले शिक्षकको प्रदर्शन, कहिले वकिलको प्रदर्शन त कहिले झगडियाको प्रदर्शन । प्रतिबन्ध लगाएपछि त झन् त्यसको विरुद्धमा पनि प्रदर्शन । माइतीघरको प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि धेरैले एउटै कुरा बोलेको सुनियो कि त्यहाँ प्रदर्शन गर्नु त हाम्रो मानव अधिकार हो, हाम्रो मानव अधिकार हनन गर्न पाइँदैन ।
वास्तवमा सरकारले प्रदर्शनमा रोक जो लगायो, त्यो कसैको मानव अधिकार हनन गर्नचाहिँ होइन । सरकार त सबैको (आफ्नो पनि) मानव अधिकार हनन नहोस् भन्ने नै चाहन्छ । यति कुरा बुझ्न जरुरी छ । अतः प्रदर्शनमा रोक लगाउनुको एउटै मात्र कारण त प्रदर्शनकारीको शक्ति र स्रोत खेर नजाओस् भनेर मात्रै हो । किनभने, माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दैमा हुनेवाला केही पनि होइन । यो अरुलाई नभए पनि सरकारलाई राम्रै थाहा छ । आजसम्म माइतीघरमा प्रदर्शन गरेर कसले के उपलब्धि हासिल गरेको छ ? कुनचाहिँ प्रदर्शनको आवाज राज्यले सुनेको छ ? कुनचाहिँ प्रदर्शनको माग सरकारले पूरा गरेको छ ? जब प्रदर्शन गरेर कुनै फाइदै हुँदैन भने प्रदर्शन किन गर्नु ? यो त समय र स्रोतको नाश मात्रै हो । वास्तवमा आफ्ना नागरिकको समय र स्रोतलाई नाश हुनबाट जोगाउन नै सरकारले यो प्रतिबन्ध लगाएको हो । यति बुझ्नुपर्यो नि ।
त्यसैकारण सरकार गीतमार्फत प्रदर्शनकारीलाई भनिरहेको छ- 'माइतीघर तिम्रो होइन, पराई घर जाऊ...।'
तर प्रदर्शनकारी गीतैले जवाफ दिइरहेका छन्- 'यो हो मेरो प्राणभन्दा प्यारो, माइतीघर माइतीघर माइतीघर !'